Henry (၆) နှစ်အကြာမှ Journey မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြင့် comebackလုပ်ခဲ့သည် - 빵야뉴스
승인 2020.11.18 20:57
[BBANGYA News | Reporter Khaing] Henry ၏ တတိယ အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော 'JOURNEY' ကို ၁၈ ရက်ညနေ ၆ နာရီတွင် အမျိုးမျိုးသော ဂီတဆိုဒ် များမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Henryသည် ၁၈ရက် နေ့လည်ခင်းတွင်, သူ၏အိမ်တွင် တတိယ မီနီအယ်လ်ဘမ် 'JOURNEY'၏ ဖြန့်ချိအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
အေဂျင်စီ Monster Entertainment Group မှ Henry၏ တတိယမြောက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည့် JOURNEY တွင် သူ၏ဘဝနှင့် ဂီတနှင့်ပတ်သက်သော ယုံကြည်မှုများနှင့် ပေးချင်သော အကြောင်းအရာများ ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် ထုတ်ဝေမည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများ ပြင်ဆင်ထားသည့် ဟင်နရီ၏ ထူးခြားသောတေးဂီတနှင့် စွမ်းဆောင်ချက်ကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖြည့်ဆည်းနိုင်သောကြောင့် ပရိသတ်များ၏ မျှော်လင့်ချက်များလည်းမြင့်မားလာသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သူ၏ဒုတိယအယ်လ်ဘမ် 'Fantastic' အပြီး ခြောက်နှစ်အကြာတွင် ထုတ်ဝေသော Henry၏အယ်လ်ဘမ်တွင် 'Radio', 'HANDS UP (Feat. pH-1)', 'RIGHT NOW','JUST BE ME','COME OVER (Feat. GRAY, Kim Go-eun, Park Na-rae, Park Joon-hyung, Jeon Hyun-moo, Jessi, Han Hye-jin), '难忘的 RADIO' ,'RADIO (Instrumental)၊ စုစုပေါင်း သီချင်း ၇ ပုဒ်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။
'RADIO' သည် ထူးခြားသော ခံစားချက်ပါသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ Henry၏ ဘဝနှင့် အမှတ်တရများအပြင် ၈၀၈ ဘေ့စ်နှင့် တက်ကြွသောတီးခတ်သံများနှင့် ဂီတ အမြင်အခင်းအကျင်းကို ထင်ဟပ်စေသော သူ၏ကိုယ်ပိုင် အရောင်များကို အများဆုံးပါဝင်ထားသည်။
ထို့အပြင် 'COME OVER' သည် GREY, Kim Go-eun, Park Na-ra, Park Joon-hyung, Jeon Hyun-moo, Jessi နှင့် Han Hye-jin တို့မှ လူများနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စွာ အတူနေလိုသော ဆန္ဒကိုဖော်ပြသည်။
ဤအတောအတွင်း ၂၅ ရက်နေ့တွင် Henry သည် တရားဝင် SNS မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပရိသတ်ကလပ် platform 'Weverse'တွင် ထုတ်လွှင့်မည့်အကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ Henry၏ ပွဲဦးထွက်မှ ပထမဦးဆုံး platform ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြားပရိသတ်များ၏ မျှော်လင့်ချက်သည် မြင့်မားနေပါသည်။